Date My Pet » Ahoana no miaraka amin'ny ankizilahy Avy amin'ny Dog Park
Last nohavaozina: Nov. 22 2020 | 2 min namaky
Sary an-tsaina izany, ianao nanipy ny frisbee amin'ny namana furry tao amin'ny zaridainam-panjakana eo an-toerana sy ny alika Hitanao ny mety ho vady fanahy lavitra. Inona no ataonao izao? Avy voalohany teny fampidirana ny famehezana ny fifanarahana ho daty, efa nanangona ny sasany amin'ny toro-hevitra ny fomba hiaraka olona avy amin'ny alika zaridaina.
Soso-kevitra #1: Ampianaro ny Dog iray mahatehotia Trick
Raha izany azo antoka ny milaza fa ny olona rehetra tao amin'ny zaridaina alika tia alika, misy zavatra mba azo dia nanana alika izay mahalala ny mahavariana mendrika fitaka. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny didy inconspicuous, dia afaka mampianatra ny alika hevi-petsin'i fa tsy midika ho ny toetra fa mpiaro ny hafa.
Soso-kevitra #2: Aoka ny Dog Play amin'ny alika hafa
Mampiseho fa ny alika tsy tia alika hafa, fa milalao aminy hihatakatahan'ny mahatonga anao fa mora hatonina kokoa. Plus raha manao namely izany eny, ny alika dia mety ho velona eo ambanin'ny tafo ihany ary tsy misy olona te hitondra ao amin'ny alika izay tsy mahazo miaraka amin'ny hafa. Ny fanalahidy dia ny hahazo ny alika ho namana voalohany.
Soso-kevitra #3: Atombohy amin'ny Casual Conversation
Na Tsara ny andro avy, na ny hoe ny alika roa no milalao amin'ny namany, hamely ny fitenenana mahazatra ny resaka. Izany dia nandritra io resaka, dia hahazo ny hianatra bebe kokoa momba io olona io. Manomboka eny miadana sy hahita izany mitarika.
Soso-kevitra #4: Takalon'ny Phone Nomery ho Doggy Date
Raha vao niresaka ianao fotoana samy hafa vitsivitsy, manontany matetika rehefa tonga any amin'ny alika zaridaina. Dia hifanakalo hevitra ianareo isa mba handrindra ny doggy daty. Io daty voalohany dia tsy ho toy ny mampatahotra araka ny mifantoka manodidina ny alika.
Soso-kevitra #5: Hanitatra ny Date Fanasana – No alika
Raha vao fantatrao fa liana, mangataka azy ireo avy amin'ny sakafo hariva daty. Rehefa mihaona amin'ny toerana akaiky kokoa Sans alika aza dia hitarika ho amin'ny resaka, ary antenaina kokoa izay hitondra antsika amin'ny zavatra bebe kokoa.
Raha ireo soso-kevitra, ianao izao mahalala izay tokony hatao amin'ny manaraka hitanao fa ny alika cutie amin'ny zaridaina.
Nahoana Isika no Tokony Andramo miaraka amin'ny olona Tsy ny Type